Machine Parts nhazi, nkenke Parts nhazi - K-Tek
Nkenke n'ibu akụkụ nhazi
Machine Parts nhazi
CNC agbanye (2-12 axis)
Nkenke Parts nhazi
Mechaa & Ọgwụ Ọgwụ
Akụkụ Akụrụngwa Nhazi
Ngwa Parts nhazi
K-Tek Machining Co., Ltd. e hiwere na 2010, emi odude ke "World Factory" -Dongguan, China, ekpuchi ebe ihe karịrị 20,000 square mita, pụrụ iche na nkenke ígwè akụkụ nhazi na mechaa ISO9001: 2015 asambodo .
Anyị nwere ike ịhazi mmepụta nke ụdị akụrụngwa niile dị ka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, ngwaahịa ndị metụtara igwe, elektrọnik, akpaaka, akụrụngwa, ahụike, ike ọhụrụ na mpaghara ndị ọzọ.
Nhazi Ogo Ogo
Iji hụ na ihe dị mma nke ndị ahịa anyị chọrọ, anyị ebubatala ngwa nhazi na ngwa nyocha dị ka Igwe ise axis (DM), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Internal / External Grinder, Laser Cutting, 3D CMM, Ogo nlele na ihe nyocha na ihe ndị ọzọ site na Germany, Japan, Switzerland na United States.
Ise axis machining
CNC igwe & agbanye
5 axis CNC machining center na-enye nkenke machining nke elu kpọmkwem na mgbagwoju akụkụ.
CNC igwe (3-4Axis)
Nye 3-axis na 4-axis CNC igwe ọrụ.
CNC agbanye (2-12Axis)
Nye 1-400 (mm) CNC ntụgharị na igwe nhazi ihe
Okirikiri ihe na-egweri
Nye nkenke ngwe nke oghere na mpụta gburugburu.
Nye nkenke waya ịcha machining.
Ọgwụgwọ ọgwụgwọ & Emecha
Polish, anodise, passivation, zinc / nickel / chrome na ọlaọcha plating, okpomọkụ ọgwụgwọ wdg
Ndị mmadụ, ,gagharị ọhụrụ, Ogo na arụmọrụ, Ndị ahịa na-ebu ụzọ.
Ebumnuche dị mma ：
Iji lanarị site na mma, afọ ojuju ndị ahịa ruru ihe karịrị 95%, gbalịsie ike inweta afọ ojuju ndị ahịa 100%. E guzobere usoro ịdị mma dabere na ISO9001: 2015 ma guzobe maka ngwaahịa ndị na-ebu oke nkenke, na-achọ imezu ihe ndị ahịa chọrọ ruo n'ókè kachasị. Usoro dị mma na-agbaso usoro dabere na njikwa njikwa ọnọdụ, na-ekpuchi ọrụ azụmahịa nke ụlọ ọrụ, mmepụta na n'ichepụta, ọrụ ndị ahịa, gburugburu ebe obibi na nlekota 5S, wdg.
3 Isi ihe Micrometer dị n'ime
Na ude niile ndị ọrụ ibe maka mgbalị na onyinye na-arụ ọrụ nke K-TEK, nakwa dị ka na-akwalite nkwurịta okwu n'etiti ndị ọrụ ibe, ike nkwurịta okwu na dockin ...
K-Tek & Ngosipụta
Mgbe afọ iri nke mmepe, K-Tek abụghị naanị na ọ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọkachamara na ndị ọrụ aka na ndị ọrụ njikwa magburu onwe ya, kamakwa nwere otu ndị ahịa ahịa dị oke mma. Iji mee ka mo ...
Pụrụ iche na nkenke ígwè akụkụ nhazi ma gafere ISO9001: 2015 asambodo.
Xinhe Industrial Mpaghara, Wanjiang District, Dongguan City, Guangdong Province, China